Imali yokutshintsha Rand (ZAR) Ukuze US dollar (USD) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 15:55
Rand ukuba Dollar ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
15:55:59 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 USD = 14.30 ZAR
I-Forex yeyona nto iphambili kwintengiso. Ukuhlaziywa okuncinci kwenqanaba lokutshintshiselana kwi-intanethi ukusuka kwi-Forex exchange. Kwangoko Rand. Ixabiso le Rand ukuya US dollar ngoku nangamaxesha ahlukeneyo.
Itshathi Forex yorhwebo US dollar - Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo Rand Ukuze US dollar ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi ye Rand ukuya US dollar phezulu yenziwe ukuba ikulungele ukuba ubukele utshintsho lotshintshiselwano. Utshintsho kumanani otshintshiselwano abonakala ngokukhawuleza kwitshathi. Sebenzisa izixhobo zokusebenza kwitshathi kwizo kanye Rand ukuya US dollar. Igrafu yokutshintsha kwemali iyitshintsha ngokuzenzekelayo rhoqo kwimizuzwana engama-30.
Tshintshela Rand Ukuze US dollar Rand Ukuze US dollar Imali yokutshintsha Rand Ukuze US dollar imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba US dollar ngelo xesha
Utshintsho kwi Rand ukuya kwi US dollar inokujongwa yonke imizuzu. 0.0000 USD - utshintsho kwi Rand ( ZAR) ukuya ku US dollar ngalo mzuzu. Imbali yemizuzu eli-10 ye Rand ukuya US dollar evela kwi-Forex etafileni kwiphepha. Ukuthumela ngokulula ulwazi kwinqanaba lomzuzu kwisiza.
15:55 15:54 15:53 15:52 15:51 15:50 15:49 15:48 15:47 15:46
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba US dollar urhwebo lilixa lokugqibela
Utshintsho kwi Rand ukuya kwi US dollar inokujongwa ngeyure nganye. Ukwehla kwe Rand ( ZAR) ukuya ku US dollar ngeli lixa yile - -0.0000 USD. Amanqanaba Rand ukuya kwi US dollar yonke iyure ibonisiwe kwitheyibhile kweli phepha. Kulungele ukuthelekisa utshintsho kumanani otshintshiselwano ngeyure nganye.
15:52 15:46 15:40 15:34 15:28 15:22 15:16 15:10 15:04 14:58
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba US dollar Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
15:55 14:55 13:55 12:55 11:54 10:54 09:54 08:37 07:24 06:24